Shuruudaha Shuruudaha iyo Shuruudaha
Shuruudahaan iyo shuruudahaan, si wadajir ah ula Nidaamkayaga Qarsoodiga ah, waxay maamulaan isticmaalka aad ka sameysid boggayaga internetka www.mh-chine.com (boggeena / boggeena), ha ahaado marti ama qof diiwaangashan. Fadlan si taxadar leh u akhri shuruudahaan iyo xaaladaha ka hor intaanad bilaabin isticmaalka goobta. Adigoo isticmaalaya boggayaga, waxaad tilmaantaa inaad aqbashay shuruudaha iyo shuruudahan iyo inaad ogolaato inaad ku dhaqanto. Haddii aadan ku raacsanayn shuruudaha iyo shuruudaha, fadlan iska ilaali isticmaalida boggayaga.
Haddii aad qabto wax su'aal ah oo ku saabsan ama aadan rabin inaad aqbasho, fadlan la soo xiriir Xoghayaha Shirkadda + 86-574-27766888 kahor intaadan isticmaalin boggan.
Waxaan badali karnaa shuruudahan iyo shuruudaha ama siyaasadeena asturnaanta waqti kasta mar kasta oo aan cusbooneysiineyno boggan. Waa inaad ka fiirsataa boggan waqti ka waqti si aad dib ugu eegto shuruudaha iyo shuruudaha si aad u hubiso inaad ku faraxsan tahay isbedel kasta. Isticmaalka ama helitaanka boggaan waxay muujinaysaa aqbalaadda shuruudaha iyo shuruudahaas. Haddii aadan aqbalin shuruudaha iyo shuruudaha, fadlan ha sii wadin isticmaalka boggan.
Xafiiskeena guud waa: #18 Ningnan North Road, Ningbo, Shiinaha.
Waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka + 86-574-27766888 ama email ahaan .
Barta internetka ee shuruudaha iyo shuruudahaas ay khuseeyaan iyo wixii aan masuul ka nahay waa www.mh-chine.com.
Helitaanka boggayaga ayaa loo ogolyahay si ku meel gaar ah, waxaanuna xaq u leenahay in aan ka baxno ama aan wax ka beddelno adeegga aanu ku bixinno boggayaga iyada oon ogeysiis. Kuma noqon doonno masuuliyad haddii sabab kasta oo ah goobta aan la heli karin wakhti kasta ama wakhti kasta.
Waxaan xakameyn karnaa helitaanka qaybo ka mid ah boggayaga, ama boggeena oo dhan, dadka isticmaala kuwaas oo naga diiwaangashan.
Boggaan iyo dhammaan walxaha ku yaala waxaa ilaaliya xuquuqda hantida garashada, oo ay ku jiraan xuquuqda daabacaadda, iyo midkeenaba nagu leh ama nala siisay inaan isticmaalno. Qalabka waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidneyn, qaabeynta, qaabeynta, muuqaalka, muuqaalka, sawirrada, sawirrada, fiidiyowyada iyo dukumintiyada bogga internetka, iyo sidoo kale waxyaabaha kale sida liisaska qiimaha, maqaallada, sheekooyinka iyo qoraalka kale.
Kama daabacan kartid, dib u cusbooneysiinaysid, dib u cusbooneysiinaysid ama haddii kale qalabka moobiilka ka dhigan kartaa boggaan internetka oo aan heli karo qof kale oo aan ogolaansho qoraal ah.
Waad daabacan kartaa ama ka soo dejisan kartaa mareegtan boggaan:
• Waxba lagama maarmaan ah in wax laga beddelo;
• Shaxbo, sawiro ama fiidiyo aan si gooni ah loo isticmaalin qoraalka la socda;
• ogeysiisyada daabacaadda copyright iyo calaamadaha ganacsiga ayaa ka muuqda dhammaan nuqullada oo waxaad u aqoonsaneysaa shabakaddan inay tahay halka laga soo xigtay; iyo
• Qofka aad u bixisay walxahan waa la ogyahay caqabadahaas.
Waa inaadan u isticmaalin qayb ka mid ah waxyaabaha ku qoran boggayaga ujeedo ganacsi adoon helin liisanka si aan annaga ama naga helno shatiyadayada, sida ku haboon.
Maaddooyinka iyo Tababarka
Boggayaga ayaa u oggolaanaya helitaanka iyo isticmaalka xisaabiyeyaasha internetka oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn Seamwork + iyo Coats Count ("App"). Xisaabiyeyaashu kala duwan waxay leeyihiin shaqooyin kala duwan oo isticmaaluhu isticmaali karo kalkulator iyadoo lagu saleynayo soo-saarka qiyaasta isticmaalaha. Tusaalooyinka kartida xisaabiyayaashu waxaa ka mid ah qiyaasidda isticmaalka moodada iyo marka la qiyaaso tirinta muraayada iyo isugeynta nidaamyada xisaabta iyo santuuqa.
Intaa waxaa dheer, boggayagu wuxuu dadka siiyaa fursad ay ku helaan qalabka tababarka ("Qalabka Tababarka") kaas oo ay ka mid yihiin balse aan ku koobnayn fiidiyowyada tababarka.
Waa inaad akhridaa, aqbashaa, ka dibna aad raacdaa shuruudahaas si aad u isticmaashid Qalabka Macluumaadka iyo Tababarka.
Si aad u isticmaasho App iyo / ama Qalabka Tababarka, waxaanu ku siinnaa ruqsad aad ku adeegsaneyso App iyo Tababarka Tababarka oo keliya oo ah hawlahaaga ganacsi ee gudaha. Liiskan waa shakhsi ahaan oo ku xaddidna adiga keligaa oo sidan oo kale ah looma kala wareejin karo.
Ma dhici kartid inaad qaybiso ama sameyso qalabka App iyo Tababarka oo laga heli karo shabakad halkaas oo ay isticmaali karaan qalabka kala duwan isla waqti isku mid ah.
Lama oggola inaad nuqul ka dhigato, dib loo dhigo, dib u noqotid injineer, isku-qasbo, iskuday in la soo saaro furaha koodhka, wax ka beddelidda ama abuurida shaqooyinka Wakaalada iyo / ama Qalabka Tababarka ama qayb kasta.
Adiga oo isticmaalaya Qalabka Macluumaadka iyo Tababarka, waxaad qiraysaa oo aad ogolaatay in:
• Qalabka App iyo / ama Tababarka waxaa loogu talagalay ujeedooyinka macluumaadka kaliya; iyo
• Ma dhicin wax damaanad ah ama ballanqaadyo sida saxda ah ee macluumaadka ku jira Qalabka Tababarka ama macluumaadka uu soo saaray App. Isticmaalka App-ka iyo natiijooyinka ka soo baxa waxaa loogu talagalay hage kaliya oo aanad u qadarin dalab, qaansheegasho, martiqaad daaweyn ama wax la mid ah.
Haddii aan wax ka qabano xogta shakhsi ahaaneed ee adiga ku matala markaad fulin lahayd waajibaadkayada ku qeexan heshiiskan, labadaba waxaan halkan ku qoreynaa ujeedadayada (ama cidda aad u shaqayso, sida ku habboon) ay tahay xog-hayaha xogta waxaananu u diri doonaa processor xog iyo kiis kasta :
• Waxaad qiraysaa oo aad ogolaatay in xogta shakhsi ahaaneed, haddii loo baahdo, loo wareejiyo ama lagu kaydiyo meel ka baxsan Dhaqaalaha Yurub ama waddanka aad ku taal, si aad u bixiso shaqada App iyo shuruudaha kale ee heshiiskaan;
• Waa inaad hubisaa inaad xaq u leedahay inaad u wareejiso xogta shakhsi ahaaneed ee annaga naga si aan si sharci ah u isticmaali karno, u hirgelino, uguna wareejino xogta shakhsi ahaaneed si waafaqsan heshiiskaan adiga oo ku matalaya;
• Waa inaad hubisaa in cid kasta oo saddexaad oo la xidhiidha la wargeliyo, oo ay siisay ogolaanshahooda, isticmaalka, wax qabadka, iyo beddelaadda sida looga baahan yahay dhammaan sharciyada ilaalinta xogta;
• Waxaanu karsiin doonnaa xogta shakhsiyadeed kaliya iyada oo la raacayo heshiiskan, shuruudaha iyo shuruudaha iyo siyaasadda asturnaanta iyo wixii talooyin sharci ah ee aad siisay waqti ka waqti; iyo
• labadaba waa inaynu qaadnaa tallaabooyin farsamo iyo kuwo urur ah oo ka dhan ah anshax la'aanta ama sharci-darrada ah ee xogta shakhsi ahaaneed ama burburka shilalka, burburinta ama burburka.
Shuruudahaas iyo shuruudahaani kama saaraan waajibaadkayaga (haddii ay jiraan) adiga:
• dhaawaca shakhsi ahaaneed ama dhimasho ee keeneysa dayacaadeena;
• Arrin kasta oo sharci darro ah inoo ah inaan ka saarno ama aan isku dayno inaan ka saarno masuuliyadeena.
Ma balan qaadi karno in website-kan uu ku habboon yahay dhammaan ama qalab kasta iyo qalab kasta oo aad isticmaali karto. Ma balan qaadi karno in boggani uu heli doono waqti kasta ama waqti kasta oo gaar ah. Waxaanu xaq u leenahay inaan ka baxno ama wax ka badalno websaydaan wakhti kasta.
Uma maleynno wax mas'uuliyad ah nooc kasta oo kasta oo ka imaanaya isticmaalka, ama ku tiirsanaan macluumaad kasta, walxo ama nidaam ku jira goobta.
Waxan ka dhignaa wax damaanad ah oo la xidhiidha goobta, ama alaabooyinka ku jira, waxaanan qaadeynaa waajibaad kale oo aan ahayn kuwa ku qoran shuruudaha iyo shuruudaha iyo siyaasadeena asturnaanta.
Waxyaabaha lagu soo bandhigay boggayaga ayaa la bixiyaa iyada oo aan la helin dammaanad, shuruudo ama damaanado sida saxda ah. Ilaa inta sharcigu oggol yahay, annaga, xubnaha kale ee kooxdayada shirkadaha iyo axsaabta saddexaad ee nagu xiraya ayaa naga go'naya:
• Xaaladaha oo idil, damaanad-qaadyo iyo shuruudo kale oo laga yaabo in ay qeexaan xeer, sharciga guud ama sharciga sinnaanta.
Mas'uuliyad kasta oo kasta:
• toos toos ah; ama
• Maqnaanshaha ama khasaare aan toos ahayn ama waxyeelo soo gaartay qof kasta oo isticmaala boggeena ama iyada oo la xiriirta isticmaalka, awood la'aanta isticmaalka, ama natiijooyinka isticmaalka boggayaga, boggaga internetka ee ku xiran iyo waliba wixii ku dhajiyey, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xadidnayn wax mas'uuliyad ah:
• lumitaanka dakhliga ama dakhliga;
• luminta ganacsiga;
• lumista faa'iidada ama qandaraasyada;
• lumista kaydka la filayo;
• macluumaadka lumay;
• lumitaanka shaki;
• maamulka lumis ama waqti xafiis; iyo wixii kale oo khasaare ah ama waxyeelo nooc kasta ah, wax kasta oo soo if-baxaya iyo haddii uu sababay cufan (ama khiyaano) (oo ay ku jirto dayacaad), jebinta qandaraaska ama haddii kale, xitaa haddii la filayo, haddii shuruudahan aysan ka hortagin sheegashada khasaaraha ama dhaawac si aad u hesho hantida la taaban karo ama sheegashooyinka kale ee tooska ah ee khasaaraha dhaqaale ee aan ka reebin mid ka mid ah qaybaha kor ku xusan. Tani ma saamaynayso masuuliyadeena dhimashada ama dhaawaca shakhsiyeed ee ka imanaya dayacaadeena, ama masuuliyadeena khiyaanada, been-been-u-dhicida ama been-been-u-sheegashada sida arrin aasaasi ah, ama mas'uuliyad kale oo aan laga saari karin ama ku xadidanayn sharciga sharci ahaan.
Macluumaad ku saabsan adiga iyo booqashooyinka boggayaga
Waxaanu ka baaraandegi doonaa macluumaadkaaga adiga oo raacaya siyaasadeena asturnaanta. Adigoo isticmaalaya boggayaga, waxaad ogolaaneysaa farsamooyinkaas oo kale waxaadna xaqiijineysaa in dhammaan macluumaadka adiga kugu haboon ay sax yihiin.
Warbixin ku saabsan website this
Haddii aan macluumaad laga helin shabakadani waa macaamil ganacsi (oo ay ku jiraan, alaabada aan xadidnayn iyo macluumaadka qiimaha), dhammaan macluumaadka kale ee ku jira boggan waxaa loo bixiyaa macluumaad guud iyo dulsaar keliya. Inkastoo aan isku dayno oo hubinno in macluumaadka ku jira websiteka uu yahay mid sax ah oo aan ilaa hadda dhicin, kama masuul noqon karno wixii khalad ah ee macluumaadka. Sidaa darteed, waa inaadan ku tiirsanayn macluumaadkan, waxaana kugula talinaynaa in aad qaadatid talobixin dheeraad ah ama aad raadsatid hagis dheeraad ah ka hor intaanad ficil ka qaadin macluumaadka ku jira boggan. Mas'uuliyadkeena adiga sida kor lagu sharxay ayaan weli saameynin tan.
Waxaa laga yaabaa inaan isku xirno shabakadaha kale ee aan ku jirin gacantateena. Annagu masuul kama ahan websiyadan si kastaba ha ahaatee, ha u diidin. Waa masuuliyadaada inaad hubiso shuruudaha iyo shuruudaha iyo siyaasadda asturnaanta ee bogga kale ee aad booqaneyso.
Ma laga yaabaa inaadan ku xidhin boggaan internetka oo kale haddii aadan raacin tilmaamaha soo socda:
• Xiriirku waa inuu ahaadaa bogga internetka ee www.mh-chine.com;
• lagama yaabo inaad abuurto shax ama xuduud kale oo ku wareegsan website-ka;
• goobta aad rabto inaad xirto waa in ay u hoggaansamaan dhammaan sharciyada iyo xeerarka ku habboon waana inaanay ka koobnayn waxyaabo laga yaabo in loo arko in ay yihiin kuwo khasaare ama weerar ah; iyo
• Waa in aanad u jeedin in aan oggolaano ama aanu la xiriirno boggaga kale, badeecada ama adeegga.
Marka laga reebo shuruudaha iibka internetka iyo shuruudaha martiqaad u ah daaweynta (maaha wax dalab ah), waxbadan oo ku yaal boggan waxaa loogu talagalay inay noqdaan ama aan loo sheegin sidii dalbasho heshiis lala galay adiga ama qof kale, marka laga reebo kuwan shuruudaha iyo xaaladaha lagu maareeyo xidhiidhka naga dhexeeya ee ku saabsan isticmaalkaaga internetka.
Haddii aad heshiis qandaraas la leedahay cid saddexaad oo magaceeda lagu magacaabo ama loo gudbiyo boggan, waa masuuliyadaada inaad hubiso inaad ku qanacsan tahay shuruudaha qandaraaska iyo inaad qaadato talo sharci haddii loo baahdo.
Viruses, Hacking iyo Dembiyada kale
Waa inaadan si khalad ah u isticmaalin boggayaga si aan ku ogaanno soo saarista fayruusyada, Trojans, Gooryaanka, bamka macquulka ah ama qalab kale oo khaas ah ama tiknoloji ahaan waxyeello leh. Waa inaadan isku dayin inaad hesho galmo aan la fasaxnayn ee boggayaga, server-yada nooca loo kaydiyo ama server kasta, kombiyuutar ama xog-dhowr ah oo ku xiran boggayaga. Waa inaadan ku weerarin boggayaga adigoo adeegsanaya diidmada adeegga diidmada ama weerarka diidmada loo adeegsado.
By jebinta xeerkan, waxaad geli lahayd fal dambi ah hoosta Xeerka Xadgudub Kumbuyuutar 1990. Waxaan u soo sheegi doonnaa wixii jebin noocan oo kale ah hay'adaha sharci fulinta ee la xidhiidha, waxaanan la shaqeyn doonaa saraakiishan iyaga oo kaashanaya aqoonsigaaga. Haddii ay dhacdo jebinta noocan ah, xuquuqdaada inaad isticmaasho boggayaga ayaa isla markiiba joojin doona.
Masuul kama noqon doonno wixii khasaare ah ama waxyeelo soo gaartay adeegga diidmada adeegga, fayruusyada ama qalab kale oo tikniko ah oo waxyeelayn kara qalabka kombiyuutarka, barnaamijyada kombiyuutarka, xogta ama waxyaabaha kale ee macaamiisha ah sababtoo ah isticmaalkaaga goobta ama si aad u soo dejisid wax kasta oo lagu soo dhejiyo, ama shabakad kasta oo ku xiran.
Sharciga Maamulka iyo Xukunka
Hirgelinta, jiritaanka, dhismaha, waxqabadka, ansaxnimada iyo dhammaan dhinacyada shuruudaha iyo shuruudaha ama marxalad kasta oo ka mid ah shuruudaha iyo shuruudahaan waxaa xukumi doona sharciga Shiinaha.
Maxkamadaha Shiinuhu waxay yeelan doonaan awood u gooni ah inay xaliyaan wixii khilaafaad ah ee ka soo bixi kara ama ku xiran shuruudaha iyo shuruudaha ama isticmaalka website-ka.
Home Home Categories - Caqabado - Zippers - Ribbon & Tape - Raashin - Meelo - Buttons - Macmiilka - Tassel & Fringe / Qalabaynta - Qalabaynta Qalabka - Gawaarida & Gargaarka - Mashiinka & Qeybaha - Faaruq - Qaar kale Nagu saabsan - MHM Overview - MH Industrial --- Fact Factories --- Farsamooyinka Ribbon & Bandhigyada --- Factory Factors - History History - Sheega Tilmaamaha --Image Galleries - Albaabada Albaabka Nala soo xiriir - Joogitaanka Goobta - Dib u noqoshada Community --Nagu soo biir